LED Square 9W , 12W , 15W
LED ဖန်းမီးအိမ်ကို လေးထောင့်ပုံစံဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ LED မီးအိမ်လေးဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ အလင်းထုတ်လွှတ်မှုအားကောင်းပြီး အရည်အသွေးမြင့် အလူမီနီယံဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ခိုင်ခံလှပမှု အပြည့်ရှိသည်။ အိမ်တွေ ကုမ္ပဏီတွေ ရှော့ပင်းမောတွေ နဲ့ အဆောက်အအုံ အများစုမှာ အသုံးများသော ဖန်မီးအိမ်လေးဖြစ်သည်။ အထဲက မီးကျွမ်သွားရင် အလွယ်တကူ ပြန်လည်တပ်ဆင်လို့ရပါတယ်။ အရောင်ကတော့ အဖြူရောင်အပြင်ကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရောင်ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ကြည်လင်တောက်ပသော အလင်းရောင်ကို ရရှိခံစားနိုင်ရန် LED Square 9W , 12W , 15Wကို အသုံးပြုကြဖို့ တိုက်တွန်းအကြံလိုက်ပါသည်။
Panel lights ကို 1&#039;x1&#039;,2&#039;x2&#039; ,4&#039;x1&#039; ,Round 6&quot;,Round 4&quot; စသည့် အမျိုးအစားများစွာ ခွဲခြားထားပါသည်။မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Panel Lights ကို ချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့် ရွေးချယ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။အရည်အသွေးနှင့်ဒီဇိုင်းမှာ ယုံကြည်စိတ်ချရကာ ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီး မှာယူလိုပါက ကျွန်တော်များ Precious Lights Co.,Ltd တွင် စိတ်တိုင်းကျ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
We compete effectively in today’s global business environment by constantly delivering high quality LED High Bay Light. Suitable for illumination purposes, this LED light is well known among our clients who are situated across the nation. The LED light offered by us is manufactured with utmost care with the use of quality assured components and sophisticated technology. Beingaquality driven company, we assure our clients that this LED light is best in terms of quality and functioning. အမြင့်မားဆုံးအတောက်ပဆုံး အလင်းစွမ်းအားကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်ုဆုံးနှင့်မြင့်မားသောနည်းပညာတို့ကြောင့် အသုံးပြုရာတွင် အလွန်စိတ်တိုင်းကျ အဆင်ပြေစေမည်ဖြစ်ပါသည်။တပ်ဆင်ရာမှာလည်း အလွန်လွယ်ကူရိုးရှင်းစေပြီး Pure Lights,Warm Lights နှစ်မျိုးရှိပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးချယ်ဝယ်ယူတပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ် ၊ ရုံး ၊ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင်များ နှင့် အခြားအဆောက်အဦးများ ရှိ အိမ် ခေါင်မိုးမျက်နှာကျက်များကို အလှဆင်ပြုပြင် နိုင်ရန်အတွက် Nation Light ကုမ္ပဏီမှ ဆောင် ရွက် ပေးလျက် ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ် ခေါင်မိုး မျက်နှာကျက်များကို လှပ ပြီး သန့် ရှင်းသပ်ရပ် သည့် မျက်နှာကျက် အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုပါက လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် ပုံစံ ဒီဇိုင်းများဖြင့် အလှဆင် နိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် အိမ်ခေါင်းမိုး မျက်နှာ ကျက်များကို လှပသော မျက်နှာ ကျက် များအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုပါက Nation Light ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။
100W High Power Lamp LED Projection Light (Waterproof )
Save electricity bill. Replace 1000W halogen bulb by 100W LED. Save 90% on electricity bill of lighting.Maintenance Free. Extremely long life reduces re-lamp frequency.Save labor cost to replace bulbs with short lifespan.Wide beam angle. Create super bright, shadow-free security and wide. Beam distribution for general purpose flood lighting.Waterproof:IP67.Totally flexible solution. Fixtures come withayoke-style arm can be positioned in almost any angle andavariety of application settings. သံချေးတက်ခြင်း နှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အရည်အသွေအထူးကောင်းမွန်သောကြောင့် လူကြိုက်များသော Flood Lights ဖြစ်သည်။WaterProof ဖြစ်ပြီးမိမိအသုံးပြုလိုသောနေရာတွင် အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း၊ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်တပ်ဆင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် အဆင်ပြေကာယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်မှာယူလိုပါကကျွန်တော်များ Precious Lights Co.,Ltd တွင် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) T8 LED မီးချောင်း (9W / 15W / 18W)
5000 ~ 6900 Kyats
အမျိုးအစား - HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) T8 LED Lamps အာမခံ - ၂ နှစ် မီးအား - 9W / 15W / 18W အရှည် - ၂ ပေ / ၃ ပေ / ၄ ပေ မီးအရောင် - 6500K အဖြူ / 3000K အဝါ ၁ ပါကင် - ၃၀ ချောင်း
5700 ~ 7500 Kyats
အမျိုးအစား - HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) T5 LED Lamps အာမခံ - ၂ နှစ် မီးအား - 9W / 15W / 18W အရှည် - ၂ ပေ / ၃ ပေ / ၄ ပေ မီးအရောင် - 6500K အဖြူ / 3000K အဝါ ၁ ပါကင် - ၃၀ ချောင်း
အကောင်းဆုံး LED Bulb
ယခုခေတ်ဟာ စွမ်းအင်ချွေတာရမယ့်အချိန်ကာလကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ မြေကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့ စွမ်းအင်များကို ချွေတာသုံးစွဲကြရပါတော့မယ်။ သို့သော် လူ့ဘ၀နဲ့ အလင်းရောင်ဟာ ခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ နေ့စဉ်လူမှုဘ၀လှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာ အလင်းရောင်ရှိမှဖြစ်မှာပါ။ အဖြေကတော့ LED Bulb တွေပြောင်းသုံးကြရပါမယ်။ LED Bulb ကောင်းကောင်းတစ်လုံးကို ဘယ်လိုရွေးရမလဲ။ အဖြေကတော့ &quot;အလင်းတုန်ခါမှုကင်းတဲ့&quot; LED Bulb မျိုးကိုရှာဝယ်ပါ။ ဈေးပေါတဲ့ LED မီးသီးတွေဟာ အလင်းတုန်ခါမှုရှိပြီး လင်းအားမလုံလောက်မှုတွေရှိပါတယ်။ အလင်းတုန်ခါမှုရှိတဲ့ မီးသီးတွေအောက်မှာ အလုပ်လုပ်ရတာဟာ သင့်အမြင်အာရုံကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းအားတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။ သင့်မျက်လုံးဆဲလ်တွေကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနာဂတ်အတွက် LED Bulb မီးသီးအမျိုးအစားကောင်းလေးတွေ ပိုသုံးဖြစ်အောင်လို့ OPPLE Lighting မှ PRO 1 Home Center များတွင် LED Bulb များကို &quot;တစ်လုံးဝယ်၊ တစ်လုံးလက်ဆောင်&quot; (BUY 1, GET 1 FREE) ပေးနေပါပြီ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်းသာဖြစ်လို့ အခွင့်အရေးကို လက်မလွတ်ရအောင် သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) T8 LED မီးချောင်း+ဖရိန် (9W / 18W)
6000 ~ 8500 Kyats
အမျိုးအစား - HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) T8 LED Lamps+Frame အာမခံ - ၂ နှစ် မီးအား - 9W / 18W အရှည် - ၂ ပေ / ၄ ပေ မီးအရောင် - 6500K အဖြူ ၁ ပါကင် - ၃၀ ချောင်း
OPPLE 2016 New Arrival Item LED HS Series 2.5&quot; LED Spot Light &amp; Down Light Clean Beam နည်းပညာသစ် အသုံးပြုထားသော ၂လက်မခွဲ OPPLE Branded LED Downlight, Spot Light အသစ်များ ရောက်နေပါပြီ။ ဈေးနှုန်းကလည်း တန်မှတန် ၅၀၀၀ိ/-ကျပ်တည်းပါ။ တစ်နှစ် အာမခံ။ Average lifetime : 20,000 hours ခဏခဏလဲနေရလို့ စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းဖြစ်ရတဲ့ MR16 Spot Light နေရာတွေမှာ အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်ဖို့ Quality branded LED Spot Light တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Contact to : 01-9000 225, 01-9000 174, 09 5500 275, 09 250 8155 94, 09 250 40 4413
HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) LED E27 မီးသီး (3W / 5W / 7W / 9W / 11W)
2000 ~ 8700 Kyats
အမျိုးအစား - HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) LED E27 မီးသီး အာမခံ - ၂ နှစ် မီးအား - 3W / 5W / 7W / 9W / 11W မီးအရောင် - 6500K အဖြူ / 3000K အဝါ ၁ ပါကင် - ၃၀ လုံး
အကောင်းဆုံးနှင့် အသင့်တော်ဆုံး OPPLE LED Ceiling Lamps
သင့်အိပ်ခန်းများအတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် အသင့်တော်ဆုံး OPPLE LED Ceiling Lamps များဖြစ်ပါသည်။ OPPLE မျက်နှာကြက်မီးဝိုင်းများသည် - အကောင်းစား Acrylic Cover များအသုံးပြုထားသောကြောင့် (၁၀)နှစ်ကျော် ကြာသည်အထိ အရောင်ပြောင်းသွားမှု/မှိန်သွားမှု မရှိခြင်း - အရည်အသွေးမြင့် မီးချုပ်၊ မီးဝိုင်း၊ LED Chips များအသုံးပြုထားသောကြောင့် ကြာရှည်ခံသဖြင့် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရန်သက်သာခြင်း၊ -အလင်းထွက်အား ကောင်းမွန်ခြင်း -အလင်းတုန်ခါမှုမရှိခြင်း(Flicker Free)၊ ဆူညံသံထွက်မှုမရှိခြင်း(Noise Free)တို့ကြာင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ကင်းဝေးစေသည့်အပြင် သင့်မျက်စိအား မထိခိုက်စေခြင်း တို့ကြောင့် သုံးစွဲသူ ပိုင်ရှင်များ စိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်အ၀ရရုံသာမက တပ်ဆင်ပေးသူ အင်ဂျင်နီယာများလည်း နာမည်ကောင်းရ၊ မျက်နှာပန်းလှလျှက်ရှိပါသည်။
High Brightness Track Lights 12 W
စွမ်းအင်ချွေတာပြီး တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူကာ ပိုမိုမြင့်မားသောအလင်းစွမ်းအားကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုဒဏ်ကိုလည်းခံနိုင်ပြီး လွယ်လွယ်နှင့်သံချေးမတက်စေနိုင်ပါ။ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်ဆုံးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး နည်းပညာမြင့်မားသည့်အတွက်ကြောင့် စိတ်တိုင်းကျ လွယ်ကူစွာ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ဝယ်ယူအားပေးလိုသောလူကြီးမင်းများအနေဖြင့် ကျွန်တော်များ Precious Lights Co.,Ltd တွင် မိမိအသုံးပြုလိုသော တပ်ဆင်လိုသော Lightings products များကို ချိုသာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် စုံစမ်းမေးမြန်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) SMD LED ဆလိုက်မီး (30W / 50W / 100W / 150W / 200W)
18000 ~ 129000 Kyats
အမျိုးအစား - HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) SMD LED ဆလိုက်မီး အာမခံ - ၂ နှစ် မီးအား - 30W / 50W / 100W / 150W / 200W မီးအရောင် - 6500K အဖြူ / 3000K အဝါ ၁ ပါကင် -6လုံး - 20 လုံး
Luxury Table Lamps &amp; Stand Lamps
လူကြီးမင်းတို့၏ နေအိမ်၊ ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ရုံးခန်းများအား လှပသားနားသော ဒီဇိုင်း၊ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သော အလင်းရောင် များဖြင့် ပိုမိုထင်ပေါ်ခန့်ညားစေမည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး မီးသီး၊ အကောင်းစား အလင်းဖြာမီးအုပ်ဆောင်းများ အသုံးပြုထားသော OPPLE အမှတ်တံဆိပ် အာမခံ စားပွဲတင်မီးအိမ်(Table Lamps)၊ မတ်တပ်မီးအိမ် (Stand Lamps) Model အသစ်၊ ဒီဇိုင်းအသစ်များ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း နှင့် နီးစပ်ရာ OPPLE အရောင်းဆိုင်များတွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။အားပေးကြသော Customer များကို ကျွန်တော်တို့ Opple မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။